Getaways Europe - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Obodo Asturia dị n'ụsọ oké osimiri
Asturias bụ obodo dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri nke Spain, yana akụkụ nke ókèala ya n'Oké Osimiri Cantabrian. Ihe karịrị otu mmadụ bi na ya Chọpụta ọmarịcha obodo dị n'ụsọ osimiri na Asturia, site na akara ukwu dinosaur, site na ụlọ ụka ochie ruo n'akụkụ osimiri mara mma.
Castropol, kedu ihe ị ga-ahụ?
Iji zaa ajụjụ ahụ Castropol, ihe ị ga-ahụ?, bụ ịgwa gị banyere ọdịdị magburu onwe ya, ihe ncheta mara mma na ememe jupụtara na omenala.
Obodo nta nke Jerte Valley
N'ime obodo mara mma nke Jerte Valley bụ obodo ndị dị ka Navaconcejo, Piornal ma ọ bụ Cabezuela del Valle. Amaja ileta ha.
Obodo kachasị mma na Andalusia
Otu n'ime obodo kachasị mma na Andalusia bụ Setenil de las Bodegas, Carmona, Frigiliana ma ọ bụ Almonaster la Real. Amaja izute ha.
Ebe dị ọnụ ala na Spain
Ị na-achọ ebe dị ọnụ ala na Spain? Anyị na-atụ aro ọtụtụ. N'ime ha, mpaghara Liébana, Ávila ma ọ bụ Costa Blanca. Amaja ileta ha.
Ọ na-adị m mgbe niile na mgbe mmadụ chọrọ iche n'echiche ndụ nke afọ gara aga, ụlọ ndị eze anaghị enye ezigbo akwụkwọ ozi. Oke okomoko, buru oke ibu, Chọpụta ụfọdụ ọmarịcha ụlọ ndị Rome kacha mma na Spain, ezigbo akụ akụkọ ihe mere eme.
Ihe ncheta ndị dị mkpa nke Spain
N'etiti ihe ncheta dị mkpa nke Spain, katidral, Alhambra na Sagrada Familia nke Gaudí pụtara. Amaja ileta ha.
Obodo ndị mara mma nke Toledo
Ịgwa gị gbasara obodo ndị mara mma na Toledo bụ ikwu maka La Puebla de Montalbán, Tembleque, Ocaña ma ọ bụ Orgaz. Amaja izute ha.
Oghere ndị kacha ibu na Spain
A na-ahụ ogige ndị kasị ibu na Spain na obodo ndị dị ka Madrid, Barcelona ma ọ bụ Seville ma ọ bụ Medina del Campo. Amaja izute ha
Obodo mara mma nke Badajoz
N'ime obodo mara mma nke Badajoz, ị nwere obodo dịka Olivenza, Jerez de los Caballeros ma ọ bụ Fregenal de la Sierra. Amaja izute ha.
Enwere ọtụtụ obodo ochie na Spain. Ha bụ obodo mara mma dịka Santillana del Mar, Albarracín ma ọ bụ Besalú. Amaja izute ha.
Osimiri Puerto de Santa María
Ókè mmiri dị na Puerto de Santa María so ná ndị kasị mma n'ógbè Cádiz. Mata ha ma kporie ndụ
Ị na-eche echiche ịga Italy? Lee obodo mara mma! N'ọtụtụ obodo mara mma ọ na-esiri ike ịhazi ụzọ iji hapụ ihe ọ bụla na-enweghị Site n'ebe ugwu ruo n'ebe ndịda ndị a bụ obodo kachasị mma na Ịtali.
Ọchịchọ metụtara ihe omume njem akwụsịbeghị ịba ụba n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọrịa ọjọọ ma ọ bụ mgbochi ...
Osimiri Nudist nke Costa Brava
Site na Blanes, na Spain, ruo Portbou, nke dị n'ókè France, na-agbatị ebe a na-akpọ Costa Brava, nke dị kilomita 214 nke dị n'ụsọ oké osimiri nke na-adọrọ adọrọ maka Summer na-abịa ma ị nwere ike ịga leta nudist osimiri nke Costa Brava ka ọ bụrụ. nso okike .
Bulgaria bụ obere obodo dị na Balkans, ugwu ma juputara na akụ maka onye njem. Ebiwo ókèala ahụ ruo ọtụtụ puku afọ, ya mere Bulgaria nwere nnukwu obodo ochie, jupụtara na ihe owuwu ụlọ na ihe ochie, yana ugwu ugwu na-agaghị echefu echefu.
Anyị na-akọwa ihe niile gbasara acropolis, ihe ọ bụ na nke kachasị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, nke Atens ma ọ bụ nke Aso. Amaja izute ha.
Ihe ị ga-ahụ na ndịda France
Kaadị ozi kacha mma sitere na ndịda France. Akụkụ a nke obodo na-achịkọta ihe niile mmadụ nwere ike ịtụ anya na ezumike French nwere osimiri, ngwaa na-abịa ma ọ bụ oge ịhazi ezumike na anyanwụ na ọmarịcha ala. Maka nke ahụ, kedu maka ndịda France na Saint Tropez, Nice, Saint Remy, Arles, Avignon...?
Osimiri ndị dị na Algarve, dị ka Marinha, dị egwu nke na ha so na ndị kasị mma na Europe. Amaja izute ha.
Obodo kacha mma na Cadiz
E kewara obodo ndị mara mma na Cádiz n'etiti ụsọ oké osimiri na ime obodo. Ma ndị Sierra de Grazalema pụtara iche. Amaja izute ha.
Bunkers na Spain
Enwere ọtụtụ bonka na Spain si Bilbao ruo Catalonia, na-agafe Madrid. Ị cheghị na ịga leta ha bụ ụdị njem nlegharị anya ọzọ?
Obodo kachasị mma na Mallorca
Obodo kacha mma na Mallorca na-achịkọta ọnụ mmiri ndị mara mma, ọmarịcha ala na ihe ncheta. Amaja ị gabiga ha.
Olee otú e si hiwe Àgwàetiti Canary?
Agwaetiti Canary bụ agwaetiti dị n'Oké Osimiri Atlantic. Ha dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Africa na n'ozuzu ha gbakwụnye ihe dị ka àgwàetiti asatọ, àgwàetiti ise na asatọ. Canary Islands bụ àgwàetiti ndị nwere ugwu mgbawa na-arụ ọrụ na ọdịdị na-ejubiga ókè. Chọpụta ihe a maara banyere nhazi ya site na oge, magma na mgbawa pyroplastic.
Obodo ndị dị nso na Madrid iji nọrọ ụbọchị ahụ
N'ime obodo ndị dị nso na Madrid iji nọrọ ụbọchị anyị na-akwado Aranjuez, Patones de Arriba ma ọ bụ Buitrago del Lozoya. Amaja izute ha.
Obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri nke Malaga
Obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri Malaga na-enye gị ọmarịcha osimiri na ihe ncheta mara mma nke nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme. Mata ha ma kporie ndụ.
Obodo kachasị mma na Catalonia bụ ma n'ụsọ oké osimiri mara mma ma na mbara ala ndị mara mma. Amaja izute ha.
Kedu mgbe ị ga-aga Iceland?
Kedu mgbe ị ga-aga Iceland? Oge niile dị mma ịga na mba Nordic, mana ọkọchị bụ oge kacha mma. Amaja izute ya.
Ihe ị ga-eme na Cíes Islands
Agwaetiti Galician kacha mma bụ agwaetiti Cíes, paradaịs, kaadị ozi mara mma nke na-adọta ndị ọbịa si na Europe niile. Nke mere na ha bụ Chọpụta ihe ịtụnanya okike nke agwaetiti Cíes, akụ dị n'ụsọ oké osimiri Galici.
Ọgba na Asturia
Asturia bụ obodo kwụụrụ onwe ya na Spen, nke dị n'akụkụ oke osimiri nke obodo ahụ. Ihe dị ka otu nde mmadụ bi na ya bụ mpaghara Asturias bụ isi obodo ọgba na nka nkume na Spain. Zute ọmarịcha ọgba kachasị mma na nke bara uru.
Deserts na Spain
Ikwu banyere ọzara na Spain pụtara ikwu banyere Tabernas, na Almería. Ndị ọzọ bụ mpaghara ọzara. Amaja izute ha.
Obodo ndị Madrid agbahapụla
Obodo Madrid ndị a gbahapụrụ agbahapụ bụ ihe atụ nke Spen nke ndị mmadụ bi na ya bibiri. Ma gaa n’ihu leta ha. Ha na-edebe ihe karịrị otu ihe ijuanya.
Obodo kacha oyi na Spain
Obodo kacha oyi na Spen bụ nke a na-ahụ na ugwu Castilian, Aragon na n'ebe ọwụwa anyanwụ Catalonia. Amaja izute ha.
Asturias obodo nwere osimiri
Asturias obodo nwere osimiri. Anyị na-atụ aro ka a njem nlegharị anya n'ụsọ oké osimiri nke Principality maara obodo ịkụ azụ ya kacha mma
Obodo ndị dị na Germany
Germany nwere ọtụtụ ebe mara mma maka njem nlegharị anya mana n'ofe obodo, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ihe niile metụtara Agha Ụwa nke Abụọ enwere Chọpụta obodo ndị mara mma na Germany: Görlitz, Tübingen, Füssen, Bacharach na ọtụtụ ihe bara nnukwu uru oge ochie.
Otu n'ime osimiri kacha mma na Spain bụ Costa Brava. Ọ na-agba ọsọ 214 kilomita ruo ókè ya na France na ọ bụ ebe a, na Cap de Creus, ebe e nwere The coves of Cadaqués, na mara mma Costa Brava, ha bụ ihe niile ị na-achọ: kristal doro anya mmiri, egwuregwu, ntụrụndụ, ọdịdị. , ọrụ... .
Ihe ị ga-ahụ na Firgas de Gran Canaria
Kedu ihe ị ga-ahụ na Firgas, Gran Canaria? Ihe a na-akpọ Villa del Agua nwere ọmarịcha ncheta na ọdịdị mara mma. Amaja izute ya.
Obodo kacha eleta na Europe
Europe bụ mpaghara ndị njem nlegharị anya kacha eleta n'ụwa. O nwere oge ụfọdụ obodo ya kachasị mma nọ n'azụ ákwà mgbochi igwe, mụta banyere mba ndị a kacha eleta na Europe, bụ ndị njem na-ahọrọ.
Ihe ị ga-ahụ na Lagos, Portugal
Lagos bụ otu n'ime pearl ndị njem nlegharị anya nke Portugal: osimiri, okwute, ọnụ ọnụ ugwu, oke osimiri na nnukwu ihe nketa omenala.
Ihe ị ga-ahụ na Sierra de Gredos
Kedu ihe ị ga-ahụ na Sierra de Gredos? Ọdịdị mara mma ya na obodo ukwu ya ga-amasị gị. Amaja ileta ha
Ihe ị ga-ahụ na Saint Malo, France
France nwere ebe mara mma ebe ejikọtara nka na akụkọ ihe mere eme. Otu n'ime ha bụ Saint Malo, ebe ndị njem nlegharị anya kacha ewu ewu na Brittany Saint Malo bụ pearl ndị njem nlegharị anya na French Brittany, ebe dị n'etiti Roman na mgbe ochie, nwere osimiri mara mma na nnukwu njem.
àkwà mmiri ndị Rom a ma ama
Àkwà mmiri ndị Rom a ma ama dị ka Mérida ma ọ bụ Aelius na-egosi nkà ndị injinia na Rom oge ochie. Chọpụta ihe kacha mma
Akụkọ ihe mere eme nke mkpọmkpọ ebe ndị Rom na osimiri Bolonia
O nwere obodo dị n’ebe ndịda Spen a na-akpọ Bolonia. N'ebe a, n'akụkụ osimiri ya, n'ụsọ oké osimiri nke Gibraltar, e nwere mkpọmkpọ ebe ndị Rom, zute Baelo Claudia, bụ mkpọmkpọ ebe ndị Rom kacha dị egwu na Iberian Peninsula dum.
Ebe ị ga-eji dolphins gwuo mmiri na Spain
Dolphins mara mma ma mara oke mma. Ha bụ mammals mmiri, cetaceans, na e nwere ụdị 34. Ị maara? Ahụrụ m ha n'anya, ma m na-ewere ha dị ka, n'agbanyeghị na a machibidoro iwu iji dolphins igwu mmiri na Spain, e nwere ebe ị ga-ezute ma soro ha na-akpakọrịta.
Obodo mara mma na Sierra de Madrid
Otu n'ime obodo ndị mara mma na Sierra de Madrid bụ Buitrago del Lozoya, Rascafría, El Berrueco ma ọ bụ La Hiruela. Amaja ịma ha.
Ọchịchị Andorra dị n'etiti Spain na France na ọ bụ obere obodo nwere ikike nke ókèala ya na-erughị kilomita 500. Gagharịa na Andorra: ị nwere ike ịga njem nlegharị anya, gaa na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ski na ịzụ ahịa dị ukwuu.
Otu n'ime mpaghara kacha mma na Germany bụ ọhịa ojii. Ònye na-apụghị ịdaba n'anya ya ok ọhịa, ya akụkọ ifo obodo, ya Were mara ndụmọdụ ndị a ghara uche kasị mma nke Black Forest: hiking, ski, ochie obodo, ochie mines, ọmarịcha nri, agaghị echefu echefu Okirikiri.
Na Mallorca e nwere obodo nwere aha Portocolom, obodo ochie na-akụ azụ, onye njem nlegharị anya nke ukwuu, nke na-adabere n'ọnụ mmiri mara mma ma bụrụ nnukwu Portocolom bụ obodo ịkụ azụ na Mallorca nke bụ nnukwu ebe okpomọkụ maka ebe obibi ya, oké osimiri turquoise ya. , ọgba ya, kichin ya ...
Mgbe oge okpomọkụ na-ada n'ebe ndịda France, akụkụ ụfọdụ nke ime obodo na-atụgharị lavender ma yinye ihe nkiri dị ebube. Nke a bụ otú ha si mara mma n'oge okpomọkụ na-afụ na Provence na ime obodo France na-eji lavender wụsa.
O doro anya na Osimiri Amalfi bụ otu n'ime pearl ndị njem nleta kacha mma na Ịtali, ma ọ bụkwa eziokwu na maka njem mbụ ọ nwere ike ịghọ ihe.
Ihe ị ga-eme na La Palma dị mfe ịza n'ihi ọdịdị dị egwu ya na ihe ncheta ya mara mma. Gaa n'ihu gaa leta agwaetiti ahụ ma nwee obi ụtọ.
Na mpaghara Limousin, France, enwere obodo mara mma nke mba ụwa matara maka ịdị mma na ịma mma nke poselin ya: Limoges. Ọ bụ obodo Limoges, ọdụdụ nke poselin kacha ewu ewu n'ụwa, nwere ọmarịcha ihe ga -enye gị.
Obodo mara mma na Obodo Valencian dịka Peñíscola, Morella ma ọ bụ Guadalest na -eche gị. Amaja ịbanye na izute ha.
Ihe ị ga -ahụ na La Gomera dị mfe ịza: ọmarịcha ala, osimiri mara mma na ọtụtụ ihe ncheta. Amaja ịmata ya
Ebee ka ịga ezumike na Spain?
Ị chọrọ ịma ebe ị ga -aga ezumike na Spain? Chọpụta ebe ịtụnanya ise na mba anyị wee nwee ọmarịcha ụbọchị anwansi.
Ụlọ nsọ Megalithic nke Malta
Ụwa nwere ọtụtụ ebe dị omimi, nke ndị amachaghị nke ọma na ọtụtụ ihe a na -eche. Malta bụ otu n'ime ha ma ọ bụ karịa, ụlọ arụsị.
Ihe ị ga-ahụ na Picos de Europa
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọpụta ihe ị ga -ahụ na Picos de Europa, banye wee chọpụta ọdịdị pụrụ iche na obodo mara mma.
N'ezie afọ na -abịa ga -abụ afọ ka mma ma anyị ga -enwe ike ịnụ ụtọ ezumike ezumike anyị karịa. Es Trenc Beach bụ otu n'ime osimiri mara mma na ewu ewu na Mallorca: anyanwụ, dunes. oké osimiri turquoise, ọtụtụ udo.
Biarritz nwere ọtụtụ oke osimiri maka sunbathing, sọọfụ, igwu mmiri, igwu egwu ma ọ bụ ịgagharị. Olee nke ị na-achọ?
Obodo iri kachasị mkpa na France
Obodo iri kachasị dị mkpa na France abụghị naanị site na ọnụọgụ na ike akụ na ụba, kamakwa site na akụkọ ntolite na ihe nketa
Guadalest bu ihe omuma nke ihe omuma banyere ihe omuma na akuku nke netwok nke obodo ndi mara nma na Spain. Amaja ileta ya.
Cala Moraig bụ otu n’ime osimiri kachasị iche na mpaghara Alicante. N'ime ya, Cova dels Arcs pụtara.
Melero meander na-etolite ala pụrụ iche ma maa mma ị nwere ike ịhụ na Caminomorisco, nke dị na mpaghara Las Hurdes.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ime njem ime ime obodo dị na Galicia, anyị na-agwa gị ọtụtụ ebe aga - aga Costa da Morte, Ribeira Sacra ma ọ bụ Mariña Lucense
Ihe ị ga-ahụ na Extremadura
Extremadura bụ otu n’ime obodo kwụụrụ ọtọ nke Spain ma mejupụtara ógbè abụọ, Badajoz na Cáceres. Ọ bụ ala ...
Timisoara, ya na amara ndi Romania
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe bụ ebe mara mma. Ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahapụla akara ha ma nwee ...
Agwaetiti kacha mma Portuguese
Obi abụọ adịghị ya, Portugal bụ otu n'ime oge ezumike ebe ndị ọzọ bi n'akụkụ kachasị oyi na-ahọrọ ...
Brindisi bụ otu n'ime ebe nlegharị anya nke mpaghara Italy nke Apulia. Ọ na-enye gị ọmarịcha osimiri, ihe ncheta na nri dị ụtọ.
Ponte Maceira bụ obodo mara mma nke dịdebere Santiago de Compostela nke na-apụ apụ maka ọdịdị ya dị ebube na ihe ncheta ya.
Obodo nke Córdoba
Obodo ndị dị na Córdoba na-enye gị ọmarịcha ihe nketa magburu onwe ya yana ala ahịhịa juru na ahịhịa oliv.
Ihe ị ga-eme na Dresden
Dresden bụ obodo German, isi obodo steeti Saxony. Ọ bụ obodo ochie, omenala, dị mma ma ọ bụrụ na-amasị gị ...
Na Latin Transylvania pụtara "ala gafere oke ọhịa." Ọ bụ ala mara mma nke ukwuu nke ugwu na oke ọhịa. Aha gị…
Duomo nke Florence
Otu n’ime ụlọ arụsị ndị kachasị ukwuu na Krisendọm bụ Katidral Florence, nke ọtụtụ ndị na-akpọ Duomo. N'ezie…
Otu n'ime saịtị kacha ochie na Norway bụ Stavanger. Ọ bụ n'otu oge obodo na obodo na ...
A ka ga-ahụ ihe ochie nke alaeze ochie na ikpe na-ezighị ezi n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa. Ọ bụ okwu nke Island ...
Njem Nleta nke Nuremberg
Otu n'ime obodo ndị nwere oke nke ya n'akụkọ ihe mere eme bụ Nuremberg. Echere m na anyị maara ya karịa site na akwụkwọ ...
San Vicente de la Barquera na-enye gị ezigbo okike gburugburu ebe obibi, ọtụtụ ihe ncheta na gastronomy na-atọ ụtọ na-adabere n'ịkụ azụ.
Ọ bụrụ na ị na-amasị njem njem, n'èzí ma na-gbara ya gburugburu Nature, a njem nleta ebe bụ maka ...
France nwere ọtụtụ ebe mara mma ma ị gaghị anọ naanị Paris. Iji maa atụ, obodo ọzọ nwere ọtụtụ akụkọ ntolite bụ ...
Pula na Croatia
Pula na Croatia abụrụla ebe dị mkpa maka njem nleta n'ihi ihe nketa Roman na nke ochie na oke osimiri Adriatic.
Las Hurdes abụghịzi ókèala azụ nke Buñuel gosipụtara. Taa, ha na-enye gị oke ala na oke gastronomy.
Grindelwald, ke Switzerland
Switzerland bụ obodo postkaadị. Mara mma ọdọ Okirikiri ala, ọmarịcha obodo nta, ọcha obodo, gụrụ akwụkwọ ụmụ amaala, ezi ụzọ njem transportation Ee…
Ebe ihe nketa ụwa na Hungary
Hungary nwere ike ịbụ obere obodo mana o nwere ọtụtụ saịtị UNESCO na-ahụta tosiri ịbụ ọnọdụ World Heritage. Mgbe ole…
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na obodo French nke La Rochelle, ebe njedebe nwere obodo ochie mara mma na ọdụ ụgbọ mmiri na-adọrọ mmasị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ baths na anụ ọhịa, na-esiri gị ike mgbe niile, ị ga-agarịrị Iceland. Mịnịsta ala ahụ kwupụtara ...
Monachil nwere ebe ezumike nke Sierra Nevada na mpaghara ime obodo ya. Ma ọ na-enye gị nnukwu ihe nketa na ezigbo gastronomy.
Ọ bụrụ na ị masịrị akwụkwọ akụkọ Jane Austen ma ọ bụ ihe nkiri Bekee ọ bụla nke mere na narị afọ nke XNUMX, mgbe ahụ n'ezie ...
Njem gaa agwaetiti nke Madeira
Agwaetiti Madeira bụ agwaetiti ndị Portugal nwere agwaetiti ise, nke mmadụ abụọ bi n’ime ya. Ha bụ…
Ogige Ntụrụndụ Peneda-Gêres
Ma obu mgbe ị na-alaghachi na Galicia ma ọ bụ dịka akụkụ nke njem na Portugal, gaa na National Park da…
Playa de Aro dị na etiti Costa Brava wee pụta maka ọmarịcha coves ya, oke ala ya na nri ya na-atọ ụtọ.
Robledillo nke Gata
Robledillo de Gata bụ ọla dị na mpaghara Cáceres. Ọ na-echekwa usoro ọdịnala ya ma nye gị ụzọ ụkwụ mara mma.
Gaa Lago di Como
Ọ bụrụ na e nwere obodo a mara mma ọdọ mmiri na Italy, nke ahụ bụ Lago di Como.
Sant Feliu de Guixols nwere nnukwu ihe nketa. Ma, karịa ihe niile, ọ na-enye gị ọmarịcha osimiri na coves na ọnọdụ na-enweghị atụ.
Njem njem site na Kapadoshia
Otu n'ime akwụkwọ mgbasa ozi kasị ewu ewu na Turkey bụ Kapadoshia, ógbè akụkọ ihe mere eme nke gbasara ọtụtụ ógbè ma nwee ...
Agwaetiti nke asatọ nke Canary Islands, La Graciosa, nwere àgwà niile dị mkpa iji jiri ụbọchị ole na ole mee ka ...
Egwuregwu na Andorra na-enye gị ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu n'ihi ihu igwe ya, ogo snow ya na ọdụ ya ndị mara mma.
N'elu Osimiri Sella na Picos de Europa gbara ya gburugburu, n'ebe mara mma na-enweghị atụ ị ga-ahụ ...
Osimiri n'akụkụ Lisbon
Osimiri ndị dị nso na Lisbon karịa imeju maka enweghị ájá na isi obodo Portuguese ebe ọ bụ na ha nwere maka ezinụlọ, ndị na-eto eto na ndị na-egwu mmiri.
Ndị dị ọnụ ala ọdụ ụgbọ mmiri
Oge opupu mmiri ka malitere ma ị na-echeworị maka itinye oge ọkọchị n'akụkụ osimiri? N'oge ...
Patones si n'elu
Patones de Arriba bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke ụlọ slate na Madrd. Ma o nwekwara ihe ùgwù gburugburu.
Delphi, na Gris
Gris bụ ebe onye njem ọ bụla na-agaghị echefu. Ọ nwere ihe niile: nnukwu gastronomy, ọtụtụ akụkọ ntolite, ọtụtụ ọdịbendị na ...
Pedraza, nke dị na Segovia, bụ otu n’ime obodo nta ndị a na - edughachi gị na Middle Ages maka okporo ụzọ ya ndị dị warara, nke jupụtara na ya na ihe ncheta ya.
Ihe ị ga-ahụ na Ribeira Sacra
Anyị na-agwa gị ụfọdụ ihe ndị bụ isi nwere ike ịhụ na mpaghara Ribeira Sacra na Galicia.
Ihe ị ga-ahụ na Bergen
Ọ bụrụ na ị na-eleta Norway, mgbe ahụ Bergen ga-anọ na ndepụta gị dịka ọ bụ obodo nke abụọ kachasị na ...
Ihe ị ga-ahụ na Catania
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịga na obodo Italia mara mma nke Catania dị na agwaetiti Sicily n'akụkụ Ugwu Etna.
Ọtụtụ agwaetiti ndị offertali na-enye gị ebe mara mma na ụsọ mmiri, ihe ncheta, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ochie na ezigbo gastronomy.
Na ezumike na Gris n'oge ụfọdụ mmadụ na-esi na ala banye na agwaetiti, na n'okwu a enwere otutu ...
Ihe ị ga-ahụ na Turkey
Republic of Turkey kewara ókèala ya n'etiti Europe na Eshia, ma bụrụkwa ala bara ụba na ...
Obodo nke Almería
Obodo ndị dị na Almería kwesịrị nleta. N'ime ha, ị ga-ahụ akụkọ ihe mere eme na ihe ncheta, ihe ndị mara mma na ọmarịcha gastronomy.
Ihe ị ga-ahụ na Chinchón
Enwere ọtụtụ ndị kọwara Chinchón dị ka obodo kachasị mma na Madrid dịka ọ bụ otu n'ime obodo ...
Obodo nke Italy
Obodo niile nke havetali nwere ihe ncheta nke ga-amasị gị. Mana n'etiti ha, Rome, Vatican City, Milan, Venice na Florence pụtara.
Nlegharị anya na Finland
Ogologo oge enwere ọganihu maka mba nke Northern Europe, mana ebe ọ bụ na njedebe nke of
Naples na ọtụmọkpọ ya
Otu n’ime obodo ndị kasị ukwuu n’ Italytali bụ Naples, isi obodo Campania. Ọ bụkwa nnukwu ebe njem nleta ugbua ...
London bụ otu n'ime obodo ndị kachasị ibu na nke kachasị egwu n'ụwa. Ma ọ bụ oge mbụ ị gara ...
Turin bụ isi obodo nke Alaeze Paimonte-Sardinia, na-ahụ maka njikọta Italiantali. Ọ na-enye gị ọtụtụ ihe ncheta na ọmarịcha gastronomy.
Obodo kacha mma mara mma na Europe
Anyị na-egosi gị ụfọdụ n'ime obodo ndị kachasị mma na Europe, obodo ndị anyị kwesịrị ileta ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ anyị.
Otu n'ime ebe kachasị elu na Itali bụ Sardinia, agwaetiti mara mma na Oké Osimiri Mediterenian, nke afọ ...
Utezọ nke nnukwu ụlọ nke France
Routezọ nke nnukwu ụlọ nke France gafere site na Loire Valley, gụnyere ọtụtụ ụlọ iri na abuo mara mma ma bụrụ World Heritage Site.
Osimiri nke Europe
Osimiri bụ akụkụ nke ọdịda ala Europe yana akụnụba ya na akụkọ ntolite ya. Ndụ gafere ...
Ihe ị ga-ahụ na Calaceite
Chọpụta ihe anyị ga - ahụ n’obodo Calaceite, ebe ị ga - ahụ obodo ochie ochie mara mma na ihe nketa dị mkpa.
Izu a pụrụ iche maka ndị na-enwe ọondersụ dị egwu, njem na ụmụaka ma ọ bụ ihu ala na ...
Cuevas del Águila, iju ala
Caves bụ ebe mara mma nke ọtụtụ ndị oge ochie yiri ka ọ bụ ọnụ ụzọ ụwa. Kama anwansi, ha bu ...
Anyị na-ekwu maka ọdịdị ala mara mma kachasị mma na Spain maka ngwụcha izu na-achọpụta ọdịdị ala mara mma.
Vatican City bụ otu n'ime microstates ole na ole dị na Europe ugbu a ma dị na Rome, ...